I-China Eco-friendly iCompLA eComplexable Ukuqulunqwa kweTableware kunye neFektha | Gianty
Itafile enokuphinda isebenze kwakhona yenziwe bioplastic. Izinto ezibonakalayo zibizwa ngokuba yi-PLA kwaye zenziwe ngombona. Akukho sixhobo sePlasitiki kwaye Akukho Sifo seTyhefu. Le cutlery enemibala iseti yokwenza ukonwaba ngakumbi kwisidlo sangokuhlwa. Ilula kwaye ikhululekile ukuyisebenzisa, elungele ukukhempisha ikhaya okanye ipikniki. Indawo yokuhlambela ikhuselekile, nceda ungafaki microwave.
Guqula izinto zakho ezinokulahlwa ukuze ziphinde zisebenzise
Olu tshintsho lulula kwaye lubandakanya ukwenza eyona nto sele unayo. Sebenzisa iipleyiti zakho, iikomityi kunye nokusika ekhaya xa unepati ekhaya okanye uye kwipikinikini. Akunyanzelekanga ukuba usebenzise i-china okanye iiceramics ezintle. Khetha iindleko ezingaphezulu, ezinobunzima, kodwa ezinobunzima bokugcina iiplate ze-CPLA ezinokusebenziseka kwakhona zeseti yepikiniki.
Inkunkuma encinci xa usendleleni
Akusoloko kulula ukuphepha izinto ezizisebenzisa zodwa xa uphumile, kodwa ezinye izicwangciso zokuqala zinganceda. Umzekelo, ukugcina isikhonkwane esinokuphinda sisebenzise kunye nokusika engxoweni yakho kunokukuxhobisela isidlo sasemini sokugqibela semihla ngemihla.
Ithebhuleyitha yethu yeCPLA enokusetyenziswa kwakhona yenziwa ngepolylactic acid. I-Bioplastic ibhekisa kwiplastiki eyenziwe kwisityalo okanye kwezinye izinto zebhayoloji endaweni yepetroleum. Ikwabizwa ngokuba yiplastiki esekwe kwi-bio.Ingenziwa ngokukhupha iswekile kwizityalo ezinje ngombona kunye neswekile ukuguqula ibe yipylylactic acids (PLAs), okanye ingenziwa nge-polyhydroxyalkanoates (PHAs) enziwe kwizinto ezincinci. Iplastiki yePLA isetyenziswa rhoqo ekufakeni ukutya.
IPolylactide (PLA), yi-thermoplastic ehlaziyiweyo kunye nepolymer. 'Kulungiswa' ukusuka kwisitatshi sezityalo ezinje ngombona, umoba kunye neswekile yeswekile, kuyenza ibe yindalo kwaye ibe nokuzinzileyo. Ukuxutywa kweswekile kwezi zityalo kuvelisa i-lactic acid nasemva kokuphinda kuguqulwe, iifom ze-lactide. Emva kokusebenza ngakumbi kunye ne-polymerisation, kuveliswa i-polylactide resin. I-resin enesiphumo inokuba isitofu kunye nokubetha ukubumba, ukwenza iimveliso ezilahliweyo kubandakanya nezo ziboniswe ngezantsi.
IPolylactide iyakwazi ukuziphilisa, njengoko ibola ngenxa yokufumana imitha yelanga kunye neoksijini. Iphelisa i-carbon dioxide kunye namanzi, nto leyo ibangela ukuba kungabikho bungozi kwindalo.
Umxholo Isitya, ikomityi, imfoloko, isipuni
Ubunzima Plate 100g, ikomityi 100g, ifoloko 15g, isipuni 15g
Edlulileyo: I-Eco-Friend bamboo Fibre yoKuhlwa kweTafile yeDiski
I-CPLA + Imveliso esekwe kwiZityalo zoManzi…
I-Eco-friendly bamboo yeFayibhile yesidlo sasemini seTafile ...